G-talkမှာမြန်မာဖောင့်မပေါ်ပဲလေးထောင့်အတုံးလေးတွေပေါ်နေ လျင် ~ နေမင်းမောင် ( နည်းပညာ )
Home » Google Fun » G-talkမှာမြန်မာဖောင့်မပေါ်ပဲလေးထောင့်အတုံးလေးတွေပေါ်နေ လျင်
By နေမင်းမောင်10:28 PM33 comments
Click &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;a href='http://www.cincopa.com/media-platform/view.aspx?fid=AMCAlj6BI7lf'&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;here&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt; to open the gallery.&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;br /&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt; Powered by Cincopa &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;a href='http://www.cincopa.com/media-platform'&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;Media Platform&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt; for your website and Cincopa MediaSend for &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;a href='http://www.cincopa.com/mediasend/start.aspx'&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;file transfer&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;.&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;br /&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;
ဒီရက်ပိုင်းInternet Explorer9ကို Uplate ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာ G-talkမှာမြန်မာဖောင့်မပေါ်ပဲအပေါ်ကပုံ
ပါတယ်။ဒါပေမယ့်စာကိုရိုက်ထည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ G-talk Chat Box ထဲမှာမြန်မာဖောင့်မပေါ်ပဲလေးထောင့်
အတုံးလေးတွေပေါ်နေတာပါ။ကဲမိမိတို့စက်မှာလဲ Update ပေးမိလိုက်လို့အခုလိုမျိုးကြုံလာခဲ့ရင်တော့အောက်
1.အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ G-talk မှာရှိတဲ့ Setting ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။Setting Box လေးကျလာပါလိမ့်မယ်။
2.ပြီးရင် General ထဲကနေ Change Font ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။Font မှာ Zawgyi-one မပြောင်းရသေးရင်ပြောင်း
ပြောင်းလိုက်ပါ။ပြီးရင် OK ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။
3.G-talk မှာဖောင့်ပြောင်းပြီးပြီးဆိုရင် Internet Explorer ကိုဖွင့်လိုက်ပါ။ပြီးရင် Setting ကိုသွားပါ။ညာဘက်
ထောင့်ဆုံးလေးမှာ Setting ပုံလေးတွေ့ ရပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီကောင်လေးကနေ Internet options ကိုနှိပ်လိုက်
4.ဒါဆိုရင် Internet Options Box လေးကျလာပါလိမ့်မယ်။ပြီးရင်အပေါ်ကပုံမှာပြထားသလို Font ကိုနှိပ်လိုက်
ပါ။ပြီးရင်ပေါ်လာတဲ့ Font Box လေးထဲမှာ Zawgyi-one ကိုရွေးလိုက်ပါ။
5.အပေါ်ကအဆင့်တွေအတိုင်းလုပ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ G-talk ကိုပြန်ဖွင့်ပြီးကြည့်လိုက်ပါ။အရင်
ဝေယံ October 13, 2011 at 2:30 AM
သူငယ်ချင်း နေမင်းမောင် ရေ gtalk မှာ မပေါ်ရင် အခုလို ဖြေရှင်းလို့ ရသလို babylon9မှာလည်း တစ်ခါတစ်လေ မှာ မြန်မာလိုမပေါ်ဘဲ ခုလိုပဲ လေးထောင့်တုံးလေး တွေ ပေါ်နေရင် သူငယ်ချင်း ရှင်းပြထားသလို လုပ်လိုက်ရင် အဆင်ပြေ သွားပါတယ် (ဒီထက်ပို၍ ပညာရပ်များကို ဆည်းပူးလေ့လာသင်ယူ နိုင်ပြီး အများအကျိုး သယ်ပိုး နိုင်ပါစေ သူငယ်ချင်းလေးရေ)
နေမင်းမောင် October 13, 2011 at 9:30 PM
ဟုတ်ကဲ့ အခုလို ဆွေးနွေးပေးတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးတင် ပါတယ်ခင်ဗျာ။
ငတိုး December 16, 2011 at 10:04 PM
မရဘူး ဗျာ အကုန်စမ်းတာ နည်းလမ်း စုံနေပီ...လေးထောင့်ကွက်တွေပဲ ဖြစ်နေတယ်...ကူညီပါအုန်း။
gold hawk January 27, 2012 at 10:53 AM
Anonymous February 29, 2012 at 1:33 PM
ကျေးဇူးတင်သွားပြီ မသိတာလေးသိလိုက်ရလို့ပါ ခင်ဗျာ..
pandablogger April 25, 2012 at 10:45 PM
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်..သူများတွေကို ပညာပေးသလို ကိုယ့်အတွက်လည်းအကျိုးမများကြီးရှိတယ်နော်..ကြိုးစားပြီး
Mhd iliyas April 26, 2012 at 12:13 AM
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်....good luck sir ..
Unknown April 26, 2012 at 4:53 PM
min April 26, 2012 at 9:10 PM
(4.ဒါဆိုရင် Internet Options Box လေးကျလာပါလိမ့်မယ်။ပြီးရင်အပေါ်ကပုံမှာပြထားသလို Font ကိုနှိပ်လိုက်
ပါ။ပြီးရင်ပေါ်လာတဲ့ Font Box လေးထဲမှာ Zawgyi-one ကိုရွေးလိုက်ပါ။)အကိုရေ.......ရင်ပေါ်လာတဲ့ Font Box လေးထဲမှာ Zawgyi-one မရှိဘူးဖြစ်နေတယ်...ခင်ဗျ....ဘယ်လိုဆက်လုပ်ရမလည်း.....ဖြေပေးပါအုံး....ခင်ဗျ......
လောကပါလ April 26, 2012 at 10:08 PM
ဇိုး April 26, 2012 at 11:38 PM
အကိုရေ ဂျီတောမှာ ပုံလေးတွေတို့ custom message တို့ ပြောင်းလို့ မရတော့ဘူး ဖြစ်နေတယ် ပြောင်းလိုက်ရင် ခဏလေးပဲ ရတယ် ပြီးရင် available တို့ busy တို့ ပြန်ဖြစ်သွားတယ် ခဏလေးပဲ အဲဒါ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ မသိဘူး ကူညီစေချင်ပါတယ် ခင်ဗျား အကို ကံကောင်းပါစေ...ဇိုး
အစ်ကို နေမင်းမောင်ခင်ဗျာ ...
ဒီ Article လေးကို သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ဆီ Gmail နှင့် Share ချင်တာမလုပ်တတ်လို့
အစ်ကို့ စာတွေအမြဲတမ်းအားပေးနေပါတယ်၊ ကျေးဇူးလည်းအထူးတင်ပါတယ်။
khunpanoung April 27, 2012 at 4:01 PM
thank so muchhhhhhhhhhhh
khunpanoung April 27, 2012 at 4:04 PM
ကိုနေမင်းမောင် ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်... အဲဒီ အခက်အခဲကြောင့် သူများရိုက်တဲ့စာကို ကူးကူးပြီးဖတ်နေရတာ .. အခုမှပဲ တွေ့တော့တယ်...
ကိုမင်း May 1, 2012 at 3:26 AM
ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ် ဒါပေမဲ့ တစ်ခုတော့မေးပါရစေ ကျွန်တော့စက်မှာ ဒက်စတော့ပေါ်မှာ မြန်မာဖောင့်ရိုက်လို့ မရလို့ ကျေးဇူးပြုပီး လမ်းပြသင်ကြားပေးပါအုံး။
Anonymous May 11, 2012 at 11:12 AM
konaung May 17, 2012 at 7:00 PM
ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် ညီလေး နေမင်းမောင်ရေ အစ်ကို့ကွန်ပျုတာမှာအဲလိုခဏခဏဖြစ်နေတာ ဖြစ်တိုင်းလည်း မြန်မာဖောင့်ကိုအင်စတာပြန်လုပ်လိုက် ပြန်လုပ်လိုက် လုပ်နေရတာ လုပ်ရင်လည်း Restart ကကျကျသွားတော့ အနှောင့်အယှက်တော်တော်ဖြစ်တယ် အခုလိုလေးပြင်လိုက်တော့ Restart ကျစရာမလိုတော့ဘူး ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ညီလေးရာ ဒီထက်မကလည်း ကွန်ပျုတာနည်းပညာတွေကို ဆထက်တစ်ပိုးတိုးပြီး လေ့လာနိုင် ပြန်လည်မျှဝေနိုင်ပါစေလို့ အစ်ကိုဆုတောင်းပေးပါတယ်ညီလေး --
ပန်းဥယျဉ် May 20, 2012 at 9:42 PM
လိုက်ရှာလိုက်ရတာ အခုမှပဲ့ တွေတယ်ဗျာ ကျေဇူးအရမ်းတင်တယ်ဗျာ
let's say i changed the Zawgyifont but can i still use English font in that situation....?
Networking နဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ စာအုပ်လေးတွေ တင်ပေးဖို့ တောင်းဆိုပါတယ်
Anonymous June 16, 2012 at 3:49 PM
Thnx so much for this information.. But i hv another problem with my iPad 2, still not jailbreak. I m now using gtalk with IM+ on my iPad and i downloaded MMkeyboard from app store. But the problem is I could only use MMkeyboard for changing those BLOCKS to real burmese words. How can i join this MMkeyboard to IM+ gtalk? Or...is there any other route to make IM+ gtalk appear in burmese fonts? (P.S I hv heard that jailbreaking iPad is no longer safe for it ) Is that true? I honestly want burmese font on my iPad.... Plz give measuggestion if u dont mind. With regard, the one who needs help from u :)
Unknown July 9, 2012 at 6:30 PM
အထူးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ ။ လေးလည်း လေးစားပါတယ် ကျနော်ရှာနေတာ ၂ရက်လောက်ရှိသွားပီ
thank you very much.. ko nay min mg.
kyaw myo thant September 14, 2012 at 8:37 PM
ကိုနေမင်းမောင်ခင်ဗျာ ကျနော့စက်က windows764bidပါ ဒက်စတော့ပေါ်မှာ floder name ပေးတာ မြန်မာဖောင့်ရိုက်လို့မရလို့ ကူညီပါဦးခင်ဗျာ လူတင်းအပေါ်မှာ စေတနာထားနိုင်တဲ ကိုနေမင်းရဲ့ စိတ်ဓတ်ကို အရမ်းပဲလေးစားပါတယ်
Thx Bro NMM!